Iziqhamo ezine Pete
Igama Ieziqhamo ezine pete ‘stone fruit’ limele zonke iziqhamo ezizintlobo ngentlobo ezine pete phakathi, ezifana ne pesika, nectarines, plums, lychees, mangoes, coconuts, kunye ne cherry kananjalo nembotyi ze kofu, olives, almonds, dates ne pistachios.
Iziqhamo ezifana nama apile ne pere ‘ezinomphakathi’ ogcwele iintanga lendawo ingaphakathi kwiziqhamo ezinepete akusiyiyo imbewu kodwa ikhusela imbewu. Uninzi lweziqhamo ezine pete zine pete enkulu, kodwa ezimbalwa ezifana ne raspberries, zinepete ezininzi ezincinci.
Imveliso ye Apricot
Intsusa ye apricot ayaziwa ncam, kodwa esisiqhamo kukrokreleka okokuba intsusa yaso isuka kwelase mantla nakwi ntsona yase China, Central Asia, Japan, kunye ne Korea. Igama laso le sayensi yi, Prunus armeniaca...more
Imveliso ye Nectarine
Imvelaphi yesiqhamo inectarine ayaziwa, kodwa kukrokreleka okokuba yaqala ukuba khona kwiminyaka engapha kwama 4 000 eyadlulayo kwilizwe lase China, malunga nexesha ipesika zaziqala ukulinywa emizini....more
Imveliso ye Siqhamo se Pesika
Iipesika zisuka ku mantla-ntshona we China. Kukholeleka okokuba zikhuliswa kumlambo iYangzi, apho ipete ze pesika ezomeleleyo zathi zafunyanwa khona ezisukela kwiminyaka yama 6 000 BC....more
Imveliso ye Plum
Imvelaphi ye plums umnombo wazo ungajongwa ukubuyela kwimigca emibini; i-European plum eqhelekileyo, eyasuka kwi kwimilambo Black ne Caspian, ze iJapanese plum, intsusa yayo ise China....more
Imveliso yezi Qhamo ezine Pete
Ilizwe lase Mzantsi Afrika lelona lizwe lihamba phambili ekuveliseni iziqhamo ezine pete kwilizwekazi i-Afrika kodwa ngu 16% kwi Southern Hemisphere, ze ibengu 1% kwimveliso yamazwe....more